October 20, 2019 - CeleLove
သူမရဲ့ Relationship ဒီမှာပဲ ပြီးသွားပြီလို့ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
October 20, 2019 Cele Love 0
သူမရဲ့ Relationship ဒီမှာပဲ ပြီးသွားပြီလို့ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး သူမကိုယ်သူမ အမြဲယုံကြည်မှုရှိနေတတ်တဲ့ ချစ်စရာမင်းသမီးလေး ဝါဆိုမိုးဦးကတော့ ဘိုဆန်ဆန်မျက်နှာကျလေးနဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထား သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ လတ်တလောမှာတော့ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ Relationship ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ လူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဝါဆိုမိုးဉီးရဲ့စာလေးကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက ပရိသတ်တွေက […]
Egypt International 2019 နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကြီးမှာ ဝေးစ်လ်ကြက်တောင်မယ် ဂျော်ဒန်ဟတ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ
Egypt International 2019 နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကြီးမှာ ဝေးစ်လ်ကြက်တောင်မယ် ဂျော်ဒန်ဟတ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ Egypt International 2019 နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကြီးမှာ ဝေးစ်လ်ကြက်တောင်မယ် ဂျော်ဒန်ဟတ်ကိုအနိုင်ဆော့ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ သက်ထားသူဇာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ကြက်တောင်မယ်လေး သက်ထားသူဇာကတော့ မြန်မာတွေရဲ့ဂုဏ်ကို ထပ်မံဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြန်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ သက်ထားသူဇာဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိနေတဲ့ Egypt […]
ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်ပျော်နေပေမယ့် ရောင်းမယ့်ပန်းကုံးလေးတွေကိုတော့ အောက်မကျစေချင်ဘူး ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် မိသားစုရဲ့ အိမ်စားရိတ်ကို ကူညီပြီးရှာဖွေနေရတဲ့..ဒီလိုကလေးတွေရဲ့ဘဝမျိုး အများကြီးရှိနေပါတယ် နေရာတိုင်းလိုလို အမြဲတွေ့နေရပါတယ် ဆင်းရဲပေမယ့် တောင်းမစားဘူး ပန်းရောင်းစားတယ် …. ။ ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်ပျော်နေပေမယ့်ရောင်းမယ့်ပန်းကုံးလေးတွေကိုလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာ မြဲနေရောပဲ မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာ ချမ်းသာတဲ့ အလှူရှင်ကြီးတွေက ပြည့်စုံပြီးသားနေရာတွေမှာ […]
ဆေးရုံကြီးတခုရဲ့ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ပါရဂူကြီးတစ်ယောက်ဟာ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဗိုက်ကို ခွဲစိတ်ပြီး အပြီးသတ်ချုပ်ဖို့ပြင်‌နေတယ်….
ဆေးရုံကြီးတခုရဲ့ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ပါရဂူကြီးတစ်ယောက်ဟာ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဗိုက်ကို ခွဲစိတ်ပြီး အပြီးသတ်ချုပ်ဖို့ပြင်‌နေတယ်…. ဆေးရုံရဲ့သူနာပြုမအသစ် ခလေးတစ်ယောက်ဟာ ပါရဂူကြီးကို ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ကိရိယာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ တာဝန်ကိုယူထားရပါတယ်…. ပါရဂူကြီးက ခွဲစိတ်ပြီးလို့ လူနာဗိုက်ကို ပြန်ချုပ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲ သူနာပြုမ အသစ်လေးက ထ‌ပြောတယ် ….ဆရာကြီး ဒဏ်ရာ ကိုမချုပ်ပါနဲ့အုန်း…. တစ်ခြားနာ့စ်မ တွေအကုန် […]
အသက် (၆၁) နှစ်အရွယ် စိတ်ဝေဒနာရှင် သမီးကို ပြုစုဖို့ ပင်လယ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ (၈၅) နှစ်အရွယ် အဖွားအို
အသက် (၆၁) နှစ်အရွယ် စိတ်ဝေဒနာရှင် သမီးကို ပြုစုဖို့ ပင်လယ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ (၈၅) နှစ်အရွယ် အဖွားအို အသက်အရွယ်အရ နားနားနေနေ နေရမဲ့ အချိန်မှာ အချို့ အခြေခံ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေကတော့ ဝမ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။ ဘဝပေးအခြေအနေက မကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ဝမ်းစာအတွက်ပါမက အခြားသောအရာတွေအတွက်ပါ ပိုပြီး […]
အမြွှာနှစ်ဦးကိုအသက်စွန့်ပြီး မွေးသွားတဲ့ မိခင်ဈာပန မှာ ကလေးတွေရဲ့ဝန်းရံမှုကိုခံယူ
အမြွှာနှစ်ဦးကိုအသက်စွန့်ပြီး မွေးသွားတဲ့ မိခင်ဈာပန မှာ ကလေးတွေရဲ့ဝန်းရံမှုကိုခံယူ ထို င်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ အမြွှာနှစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်အရွယ်မှာ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား၊ မိခင်ရဲ့တာဝန် ကျေပွန်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊ ရှေ့ဆက်ပြီး အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်းပြီး မစောင့်ရှောက်နိုင်ရှာတော့ပါဘူး …. ။ သူမဟာ ကလေးနှစ်ဦးကို အောင်မြင်စွာမွေးပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ သေသွားပါတော့တယ် […]
အုန်းဆီိကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃)ခု ..
အုန်းဆီိကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃)ခု .. ညီမလေးတို့..မမတို့ရေ… အုန်းဆီိကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃)ခုကို “မိစံ”ပြောပေးပါ့မယ်နော် …. ။ ဆံပင်ဆိုတာ ဒုတိယမျက်နှာပါပဲ … ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ လှနေချင်တာကလည်း “မိစံ”တို့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ပါနော် … […]
*သူများ သားမယားနဲ့ ဖေါက်ပြန်ရင် အရသာ…ဘယ်လိုရှိလဲ သိချင်ရင်ဖတ်ကြည့်*
*သူများ သားမယားနဲ့ ဖေါက်ပြန်ရင် အရသာ…ဘယ်လိုရှိလဲ သိချင်ရင်ဖတ်ကြည့်* ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့ ဘုရင်ကြီးဟာ မိဘုရားမြှောက်ရန်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးက အလှမယ်ရွေးခိုင်းတယ် …. ။ ပထမဆုရတဲ့သူကို မိဘုရားခန့်အပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်လှလိုက်မလဲ ချောလိုက်မလဲ တွေးကြည့်ရင် သိသာလှပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် ဒီအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူက ဘုရင့်စားဖိုမှူးပါပဲ … […]